के शब्द "पेंडोरा" गर्छ। पौराणिक कथाहरु र वास्तविकता मा
सबै वर्ण को ग्रीक पौराणिक कथाहरु, पेंडोरा सबै भन्दा प्रसिद्ध सन्तानहरू उनको बक्स साबित अधिक यो कि फरक छ। जो खोल्न सिफारिस गरिएको छैन। लामो पहिले, केही मानिसहरू त्यो थियो जसले सम्झना। तर चेतावनी: "पेंडोरा गरेको बक्स खोल्न नगर्नुहोस्!" - यो सबै समय मा र सबै परिस्थितिमा धेरै पत्यार पार्र्ने सुनिन्छ। र शब्द "पेंडोरा" के गर्छ? कुनै हानि कहिलेकाहीं पुरातन देवताहरूको Pantheon केही मानिसहरू सम्झना छ। तिनीहरूले केही आदर दिनुपर्छ।
के शब्द गर्छ "पेंडोरा"
धेरै अर्थ वचन, तर तिनीहरू सबै ग्रीक पौराणिक कथाहरु, Erechtheus र Praksifei को छोरी एक वर्ण को नाम बाट आउनुहोस्। यो केटी पवित्र इतिहास मा उल्लेख छैन, विशेष गरी उल्लेखनीय कामहरू, र यो ज्ञात भयो भने, यो मात्र कारण आफ्नो मूर्खता र जिज्ञासा को छ। ग्रीक Pantheon को सर्वोच्च deity, सार्वभौम Zeus-Thunderer, त्यो सबै मानव दुःख निष्कर्षमा गरिएको छ जसमा, समस्याहरूको र समस्या कास्केट, को जम्मा गर्न खटाइयो भन्ने तथ्यलाई। यसलाई खोल्न, त्यो कुनै अधिकार, कुनै पनि परिस्थितिमा, पवित्र उच्च प्रशासन को विशेष निर्देशन बिना थियो। तर केटी गरेको जिज्ञासा एक कोटिगत निषेध overcame। र sinister छाती खुला थियो। एक सानो बिट, बस एक आँखा संग हेर्न सक्षम हुन। तर त्यो क्षण देखि यो मानिसजातिलाई ज्ञात भयो, शब्द "पेंडोरा" के गर्छ। र उनको दराज। यो उत्सुक केटी लागि, हामी कुनै पनि समस्या बिना र केहि बस्न भने थियो आवश्यकता छैन। र के कारण ग्रीक पौराणिक कथाहरु विश्वास गर्न छैन? सधैंभरि भण्डारण कक्ष, जो त्यो राखिएको छ सबै योग्य मानवता गर्न सम्बन्धित भए शब्द "पेंडोरा" को अर्थ। प्राचीन ग्रीस को यो ज्वलन्त छवि तेस्रो सहस्राब्दी मानवता को चेतना बस्ने भएको छ। उहाँले साहित्य र कला को क्षेत्र मा विचार र refractions को एक ठूलो संख्या फेला छ। मूलतः, यो अधिकतम दूरी मा रहनु पर्छ जो देखि sinister कुरा र समस्या को एक embodiment, रूपमा व्याख्या गरिएको छ। पेंडोरा को छवि वर्तमान दिन गर्न पुरातन समयका सबै निर्देशनहरू को कवि र कलाकारहरूको आकर्षित किन छ। र व्यवहार गर्न यो सधैं स्पष्ट छ।
के खगोल विज्ञान मा "पेंडोरा" गर्छ र यो क्षेत्रहरू संग interfaced
विश्वव्यापी ठाउँ त्यहाँ वास्तविक वस्तुहरू, पुरातन पौराणिक कथाहरु बाट मुर्ख केटी पछि नाम हो। यो को remoteness को आठौं छ स्याटर्न र भटक ग्रहिका पेंडोरा-55। उसलाई टकराव वास्तविक प्रकोप सामना। तर प्राय नाम, भर्चुअल साहित्यिक र चलचित्र ठाउँ मा पाइन्छ। के शब्द "पेंडोरा" गर्छ, त्यहाँ कम्प्युटर गेम खेल्न व्याख्या गर्न कुनै आवश्यकता छ, भर्चुअल स्पेस मा नाम छ धेरै लोकप्रिय छ। पेंडोरा को ग्रहमा कार्य हलिउड फिलिम छ "अवतार।" पूर्ण अर्को ग्रहमा, तर कार्य रूपमा ठ्याक्कै यही नामको प्रसिद्ध सोभियत विज्ञान कल्पना लेखकहरूले Arkady र उपन्यास को एक श्रृंखला प्रकट बोरिस Strugatsky। तर ग्रह पेंडोरा यी पुस्तकहरू मा एक विशिष्ट sinister भन्दा बढी रहस्यमय देखिन्छ। मुख्य वर्ण लागि ज्ञान र अनुसन्धान को वस्तु हो।
हिब्रू र यिद्दिस - फरक के? हिब्रू र यिद्दिस वर्णमाला
अंग्रेजी मा कोठा विवरण कसरी लेख्न
कमजोर र बलियो इलेक्ट्रोलाइट्स को विभाजन को डिग्री
ट्याक्सी सेवा "2412": कम्पनी मा चालक प्रतिक्रिया
ओलम्पिक सुन पदक: ओलम्पिक खेल को उच्चतम पुरस्कार बारेमा सबै
Faridun Hurshed: जीवनी र काम
एक वाशिंग मिसिन "पटल" कसरी चयन गर्न: समीक्षा। लुगा धुने मेसिन "पटल": सञ्चालनको सुविधाहरू
सीएस मा: जानुहोस् FBS समावेश किन आवश्यक छ?
Keratin कपाल सीधा - सुशील र सुन्दर
विद्युत इन्सुलेट गत्ता: लागि ढाँचाहरू, फर्नीचर र अन्य उद्योग